Vanozvimiririra vanyori III: gumi mibvunzo yaJorge Moreno anobva kuMadrid | Zvazvino Zvinyorwa
Vanozvimiririra vanyori III: gumi mibvunzo yaJorge Moreno anobva kuMadrid
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Novela, Romance novel
Mifananidzo yakarongedzwa naJorge Moreno.
Ndinounza nyowani munyori akazvimiririra iyo yakakosha kuteedzera pasi. Nechekare rekodhi rekodhi uye yakanaka yakanaka ongororo dzakanakisa, George Moreno ndipindure 10 mibvunzo pamusoro pezvose zvishoma: zvavo pesvedzero, vanyori vavanofarira nemabhuku, avo zvinokuvaraidza Semuverengi uye munyori, yako mapurojekiti uye ivo mazano nezve iyo yakaoma yekutsikisa nyika mune zvese. Ndinokutendai nenguva yenyu uye ndinowedzera kuti kuverenga chete mabhuku enyu ese anga ari mufaro uye nenguva yakanaka chaiyo. Kuti uzive zhizha rino.
1 George Moreno
2 10 mibvunzo
2.1 Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
2.2 Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
2.3 Ndiani munyori wako waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
2.4 Ndeupi hunhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
2.5 Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
2.6 Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
2.7 Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
2.8 Mhando dzako dzaunofarira?
2.9 Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
2.10 Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa chiri chevanyori vakawanda sezviripo kana kuti uchida kutsikisa?
Jorge Moreno akaberekerwa mu 1973 uye kubvira ipapo zvaive pachena: Ini ndaida kuve munyori. Kwaari, zvese zvatinoona uye neruzivo mukati memakore ekutanga ehupenyu zvinodzimwa zviri nyore kubva mundangariro dzedu uye aipedza yakawanda nguva asingayeuke zvaaida uye nemanzwiro ndakanga ndakanganwa chimwe chinhu chakakosha.
Paakanga ava kusvika makumi mana mwanakomana wake akaberekwa uye, pamwe nekuda kwekuswedera padyo nemwana achangozvarwa, akarangarira: "Munyori, ndaida kuve munyori! Zvaive izvo! ". Saka akanyora zvekare ndokutanga kuratidza zvaibuda uye, vachipesana nematambudziko ese, vamwe vaida kuverenga zvimwe.
Akaburitsa mabhuku matatu: Dhayari remunyori, UN kuunganidzwa kwenyaya yakanyorwa anopfuura makore makumi maviri nenyaya dzerudzi rwese uyezve neshanduro mu English. Uye maviri enganonyorwa: Maminitsi maviri, one komedhi nekubata kwerudo umo protagonist, yaishandiswa pazvinhu zvese zvinoenda zvisirizvo, haigone kufunga kuti mhanza inozomufambira. Iyo zvakare ine vhezheni mu italialainen; and Pasina kuzivikanwa, zvimwe komedhi inosanganisa kusagadzikana, rudo uye kuseka, umo murume nemukadzi vanosangana vasingayeuke chero chinhu pamusoro pezvekare uye voedza kudzoreredza kuzivikanwa kwavo mukutarisana nekusahadzika kwekuti chichava zano rakanaka here.
Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
Handina chokwadi chekuti vaive vekutanga, asi avo vandinorangarira vaibva kuSteamboat, uye vaitofanira kuva Friar Perico nembongoro yake o Chikwekwe pirate. Ndipo pakatangira zvese ...
Ndangariro dzangu dzinodzikirawo nenyaya yangu yekutanga. Ini ndinofungidzira kuchave neakambopfuura, asi iyo yandinorangarira yaive pandakanga ndiine makore 11 ekuberekwa rondedzero kuchikoro yezororo. Ndakagadzira nyaya yekunakidzwa nezvehoridhe uye mangwana acho mudzidzisi akabvunza kuti Jorge Moreno aive ani. Ndakahadzika pakati pekusimudza ruoko kana kutamba ndakafa. Pakupedzisira ndakainhonga. Ndofunga makumbo angu achiri kudedera. Aida kundikorokotedza nekuti yaive yekutanga uye yaivaraidza. Ndokusaka vachiri kudedera pandiri.
Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
Wekutanga kundivhundutsa aive Sinué muIjipitanaMika Valtari. Ini ndinofunga ndaive 14 pandakaiverenga uye ndinorangarira kuti yaive yekutanga ine mutauro wevakuru. Ndinofunga ndakafadzwa nazvo.
Ndiani munyori wako waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
Izvo zvisingaite: Eduardo Mendoza, Stefano King, Haruki Murakami, Ray Bradbury, Juan Jose Mamayile, Santiago posteguillo. Uye kana ndikafunga nezvazvo, zvirokwazvo mamwe akawanda anobuda.
Ndeupi hunhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
Sangana chero. Mavara andakaverenga ndeenyika yeimwe nyika, yakavharirwa mubhuku uye ndeyenyaya. Handikwanise kuzvifungidzira muhupenyu chaihwo.
Nyora, zvimwe. Ivo vanobva kune imwe, yakagadzirwa neimwe, ini ndinofarira kunakidzwa nekuaverenga.
Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
Kunyora Ndinoda kuva ndoga, uye kunze kweizvozvo hapana chimwe chinhu. Kuverenga, Handifarire kusiya mabhuku asina kupera.
Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
Nguva yakanakisa yekunyora ndeye kana ndine nguva, hatifanirwe kutambisa nguva yemahara painomuka, kunyangwe ndichiziva kuti chandinonyanya kufarira ndeche vapeworld. Zvichava nekuda kwekusurukirwa uye kunyarara.
Kuverenga, yangu yekunakidzwa nguva ndeye pamhenderekedzo, chero nguva uye pasina chekuita kumberi. Saka ndakaverenga pandinogona.
Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
Ini ndinofunga iyo yakandikurudzira zvakanyanya yaive Eduardo Mendoza muchengeti wemufananidzo. Muchikoro ivo vakatituma kuverenga Labyrinth yemiorivhi. Ndakawana chizaruro: anosetsa mabhuku mabhuku futi. Ndakaona kuti chandainyanya kufarira kunyora nyaya dzinosetsa.
Mhando dzako dzaunofarira?
Comedy, zvakavanzika, kunyengera, nyaya hapachina.
Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
Ndiri kuverenga Icho chimwe chiri mauri, naJuan Ballester.
Kana zviri zvekunyora ini ndiri kupedzisa junior novel pamusoro pemusikana ane makore gumi nematanhatu anonzwa kubva panzvimbo uye kusagadzikana uye asinganzwisise chero chinhu nezve hupenyu hwake, anomanikidzwa kuenda kumahombekombe kwemazuva mashoma kwaaimbopedza zhizha pamwe chete nasekuru nasekuru vake, apo aigona hake kugara akavharirwa muroom make asina kuona munhu. Ipapo zvinonakidza uye zvinotonakidza, chaizvo.
Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa chiri chevanyori vakawanda sezviripo kana kuti uchida kutsikisa?
Nezuro ndakanzwa pawairesi kuti mabhuku anodarika mazana masere nemakumi masere akaburitswa muna2017. Zviri pachena kuti kutumira kuri nyore. Tengesa, verenga, kuti ivo vanoda kukutsazve-iwe, kuti vanoda kukuverengera zvakare, inoita kunge yakaoma. Sezvineiwo nekuzvitsikisa-wega uye wepasirese pasirese, kutsikisa uye kuzviita iwe kuzivikanwa kuri nyore kupfuura pakutanga. Pakupedzisira zviri kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanozvimiririra vanyori III: gumi mibvunzo yaJorge Moreno anobva kuMadrid
Iyo nyowani kubva kuMendoza naPérez-Reverte kushuvira matsutso.
JK Rowling: Muenzaniso wekukunda